. * . * . ထာဝရကြယ်စင် . * . * .: ညီမျှခြင်း
ရုပ်ရှင်တကား နောက်ပြန်ရစ်သလောက်တောင် မခက်ဘူး
လက်ရှိအချိန်မှာလည်း အရောင်တွေစုံနေတာမှ မဟုတ်ပဲ
ဗညားရှိန်ကို တဂ်ကြွေးပေးမလို့ ရေးထားတဲ့စာ အကုန်ပြီးမှ လက်ကလိလိုက်တာနဲ့ ပျောက်သွားလို့ စိတ်လေသွားတယ် .. ဒါနဲ့ ရေးချင်တာ လျှောက်ရေးလိုက်တယ် .. :D ဗညားရေ ခဏတော့ စောင့်လိုက်ဦးဟေ့ .. :P
10/14/2009 12:47:00 PM
တခါတလေတော့ တချို့ဘ၀တွေမှာ ဒီလိုညီမျှခြင်းတွေ ရဖို့က ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမြဲတမ်းတော့ မဟုတ်ဘူးမလား တချိန်ချိန်ပေါ့ မျှတတဲ့ ညီမျှခြင်းတွေကြားထဲမှာ ရောက်နေပါစေလေးစားလျက်တောင်ပေါ်သား
အို့အိုးးးးးစူပါဝူးမင်း က ဒီရောက်နေတာကိုး...အတိတ်ကို ပြောင်းပြန်ရစ် ...ကမ္ဘာကြီးကို နောက်ပြန်လှည့်ပစ်လိုက်တာ .. မြန်ချက် ..ဘလက် အင် ဝှိုက် ဓါတ်ရှင်ခေတ်တောင် ပြန်ရောက် ရပါပကော.....ဒီ အီကွေးရှင်း လည်း မဆိုးဘူး ဟ...ပေါင်းရခက်ရင် နှုတ်ပြီးတော့သာ စား ပလိုက်တော့ မိုးခါးရေ ....ဟေးဟေးဟေး ..မိုင်းနပ်စ် တော့ မပြစေနဲ့ နော် ... ဟိဟိ
ညီမျှခြင်းချဖို့မရတဲ့တစ်ချို့ နေရာမှာတော့ ပေါင်းအနုတ်အမြောက်အစားတွေနဲ့ဘဝက ရှုပ်နေအုံးမှာပဲ :) သဘောပေါက်သလို ကော်မန့် ပေးလိုက်တာနော်။ :))
ညီမျှခြင်းအတွက်တောင်အဲလောက်ခက်ခဲနေရင် အဖြေအတွက်ဆို. ပိုဆိုးမယ်ထင်တယ်နော်. ကဗျာလေးလှတယ်.
ညီမျှခြင်းချဖို့ တကယ်ကို ခက်တာပါ.... အခုခေတ်အချိန်ခါမှာပေါ့
သုံည ရပါစေ.. ညီမျှခြင်းချလို့ရရင်ကျေနပ်တယ်...ချစ်ခင်စွာဖြင့်အကိုမျောက်
အဟမ်းးးးးး တို့ များတော့ ချာသင် အရမ်းတော်တာ.. . :Pမညီအောင်များ အလေးခိုးထားတာလာဟင်...းဝ))
အတိတ်ကို ပြန်လည်တူးဆွဖို့ရုပ်ရှင်တကားနောက်ပြန်ရစ်သလောက်တောင် မခက်ဘူးဒဏ်ရာ နက်နက် တခုသာလိုတာကောင်းလိုက်တာ ကဗျာလေးက ဘယ်တုန်းကကဗျာရေးတတ်သွား တာလဲ ကြည့်ရတာ အချစ်ကသင်ပေးလိုက်ပြီးထင်တယ် ဟုတ်စ သူငယ်ချင်း ...........အင်းပါ အကြွေးဆိုတာက ငါတို့တွေကြားထဲမှာ ထားနေကြပဲ ဟဟ ရေးပေးမယ်ဆိုပြီးတာပဲ
Don't try to equate the different things lay...Writing nyi hmya chin is difficult though, you can do it in another way look...အီးကွဲHaveanice days and nights!
Very Nice poem, sisI love it
အင်း...ဟုတ်ပါ့ညီမျှခြင်းတွေ ပျောက်နေတာ ကြာပေါ့....ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ...
October 16, 2009 4:27 PM
ပေါက်ပေါက်ရှာရှာစာလုံးတွေ လျောက်ပေါင်းမနေနဲ့ နော် . . . :D
ဒဏ်ရာ နက်နက် ဆိုတာ ဒဏ်ရာ မဲမဲ လို့ဆိုချင်တာလား။ စတာနော်။ စိတ်ဆိုးရဘူး။ ကဗျာလေးက အရမ်းလှတယ်။
October 17, 2009 10:36 AM
တချို့အတိတ်တွေက ကြည်နူးရတယ်တွေးမိရင် ပြုံးမိတယ်ဒီရက်ပိုင်းတော့ တချို့အတိတ်တွေက ဒေါ်သထွက်စေတယ်တွေးမိရင် မျက်စိမှိတ် မေ့ပစ်လိုက်ချင်တယ်အတိတ်တွေ အပေးကောင်းတဲ့ ဘိုးတော်တွေလေ၂ လုံး ၃ လုံး တို့များ ကုန်ခဲ့တာ မနည်းပေါ့
စာလုံးပေါင်းရခက်တဲ့ ညီမျှခြင်းကိုလာဖတ်တယ်။တော်တော်ကောင်းတယ် သိလား။